Bit By Bit - agba nwere - 4.6.2 Dochie, nụchaa, na Belata
Nke abụọ mpempe ndụmọdụ na amasị m na-enye banyere emebe digital nwere na-echebara echiche ụkpụrụ ọma. Dị ka Restivo na van de Rijt nnwale on barnstars na Wikipedia egosi, ebelata akwụ ụgwọ pụtara na ụkpụrụ ọma ga-aghọ esiwanye mkpa akụkụ nke nnyocha na imewe. Na mgbakwunye na usoro ziri ezi frameworks na-eduzi ụmụ mmadụ na-achị nnyocha nke m na-akọwa n'Isi nke 6,-eme nnyocha emebe digital nwere nwekwara ike ise na usoro ziri ezi echiche site n'ebe ọzọ: na usoro ziri ezi ụkpụrụ mepụtara na-eduzi nwere metụtara ụmụ anụmanụ. Karịsịa, ha ịrịba ama n'akwụkwọ Principles of Humane Na na Usoro, Russell and Burch (1959) chọrọ atọ ụkpụrụ ndị kwesịrị iduzi ụmụ anụmanụ research: Dochie, nụchaa, na Belata. Ga-amasị m gwa Abigel na atọ ndị a R si nwekwara ike-eji na-na a ubé gbanwetụrụ ụdị-eduzi imewe nke ụmụ mmadụ nwere. Ọ kachasị,
Dochie: dochie nwere na-erughị invasive ụzọ ma ọ bụrụ na o kwere omume
Nụchaa: nụchaa ọgwụgwọ ime ka ọ na ka adịghị njọ dị ka o kwere
Belata: belata ọnụ ọgụgụ nke ndị keere òkè gị nnwale ka o kwere mee
Iji mee ka atọ ndị a R si ihe na-egosi otú ha nwere ike nwere ike iduga mma ma ndị ọzọ obi mmadu ibuo imewe, Aga m na-akọwa ihe online ubi nnwale mere e usoro ziri ezi arụmụka. Mgbe ahụ, m ga-akọwa otú atọ R si na-atụ aro ihe na ihe mgbanwe imewe nke nnwale.
Otu n'ime ndị kasị ethically arụrịta ụka banyere digital ubi nwere bụ "mmetụta uche Contagion," nke e ekenịmde ke Adam Kramer, Jamie Gillroy, na Jeffrey Hancock (2014) . The nnwale wee ebe on Facebook na e akpali a mix nke nkà mmụta sayensị na ndị bara uru ajụjụ. N'oge ahụ, ọchịchị kasị ụzọ na ọrụ interacted na Facebook bụ News Feed, ihe algorithmically curated set nke Facebook ọnọdụ mmelite si a onye ọrụ Facebook enyi. Ụfọdụ ndị nkatọ nke Facebook ama tụrụ aro na n'ihi na News Feed nwere ukwuu n'ime mma posts-enyi igosi ha ọhụrụ party-ya nwere ike ime ka ọrụ inwe mwute n'ihi ndu-ha iyi obere na-akpali akpali tụnyere. N'aka nke ọzọ, eleghị anya ndị a pụrụ isi kwuo bụ nnọọ ihe dị iche; ma eleghị anya, ịhụ enyi gị-enwe ezigbo oge ga-eme ka ị na-eche obi ụtọ? Iji lebara ndị a sọọ mpi amụma-na-enwe ọganihu anyị ghọtakwuo otú a onye mmetụta uche na-impacted site enyi ya 'mmetụta uche-Kramer na ndị ọrụ ibe efehe nnwale. The eme nnyocha enịm ihe dị ka 700,000 ọrụ n'ime anọ dị iche iche otu izu: a "negativity belata" otu, n'ihi na onye posts na-adịghị mma okwu (eg, mwute) e enweghị usoro egbochi site na igosi na News Feed; a "positivity belata" ìgwè onye posts na nti okwu (eg, obi ụtọ) e enweghị usoro egbochi; na abụọ akara dị iche iche. Na akara otu maka "negativity belata" otu, posts e enweghị usoro egbochi n'otu ọnụego dị ka "negativity belata" otu ma enweghị banyere mmetụta uche bụ ọdịnaya. The akara otu maka "positivity belata" otu E wuru a yiri ejiji. Ihe a haziri nke a Nchọpụta ahụ gosiri na ihe kwesịrị ekwesị akara otu bụghị mgbe niile onye na-enweghị mgbanwe. Kama nke ahụ, mgbe ụfọdụ, akara otu na-enweta a ọgwụgwọ iji ike ahụ kpọmkwem tụnyere na a nnyocha ajụjụ a chọrọ. N'ọnọdụ nile, ndị posts na e-egbochi si News Feed ka nọ dị ka ọrụ site n'akụkụ ndị ọzọ nke Facebook website.
Kramer na ndị ọrụ ibe chọpụtara na ndị na-positivity belata ọnọdụ, pasent nke oma okwu ha mmelite ọkwa ebelata na pasent nke na-adịghị mma okwu ụba. N'aka nke ọzọ, maka ndị na-negativity belata ọnọdụ, pasent nke oma okwu ụba na pasent nke na-adịghị mma okwu ebelata (ọgụgụ 4.23). Otú ọ dị, ihe ndị a nwere nnọọ obere: ihe dị iche na nti na-adịghị mma okwu n'etiti agwọ ọrịa ma na njikwa bụ banyere 1 na 1000 okwu.
Ọgụgụ 4,23: Àmà nke obi contagion (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . Pasent nke oma okwu na-adịghị mma okwu site ibuo ọnọdụ. Ogwe-anọchi anya Ndị na-eme atụmatụ ọkọlọtọ njehie.
M na-etinye ntụle nke nkà mmụta sayensị na akụkụ nke ihe a na inwekwu ọgụgụ ngalaba na njedebe nke isi, ma dị mwute ikwu, ihe a bụ kasị mara nke na-amụba usoro ziri ezi arụmụka. Dị nnọọ ụbọchị mgbe a akwụkwọ e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences, e nwere nnukwu ihe Mkpu ákwá ma na-eme nnyocha na pịa. Iwe gburugburu akwụkwọ lekwasịrị anya isi ihe abụọ: 1) sonyere ka ọ bụla nkwenye n'ofè ọkọlọtọ Facebook okwu-nke-ọrụ n'ihi na a ọgwụgwọ na ụfọdụ echiche nwere ike ime ka nsogbu ka sonyere na 2) ọmụmụ ama agbanweela-atọ ndị ọzọ usoro ziri ezi review (Grimmelmann 2015) . The usoro ziri ezi Ajụjụ ndị a jụrụ na a arụmụka mere ka magazin ngwa ngwa ebipụta a obere "isiokwu ngosipụta nke nchegbu" banyere ụkpụrụ omume na usoro ziri ezi nyochaa usoro maka nchọpụta (Verma 2014) . Ụdi afọ, Nnwale ahụ wee na-ịbụ isi iyi nke ufiop arụmụka na esemokwu ahụ, nke a esemokwu ka nwere ike ịbụ na ndị na-atụghị mmetụta nke ụgbọala n'ime onyinyo ọtụtụ ndị ọzọ nwere na a na-rụrụ site ụlọ ọrụ (Meyer 2014) .
Nyere na ndabere banyere mmetụta uche Contagion, M ga-now-amasị-egosi na 3 R si nwere ike na-atụ aro ihe, bara uru ndozi n'ezie ọmụmụ (ihe ọ bụla i nwere ike onwe-eche banyere ụkpụrụ ọma ndị a akpan akpan nnwale). The mbụ R bụ Dochie:-eme nnyocha kwesịrị ịchọ iji dochie nwere na-erughị invasive na ize ndụ usoro, ma ọ bụrụ na o kwere omume. Dị ka ihe atụ, kama na-agba ọsọ nnwale, na-eme nnyocha nwee ike erigbuwo a eke nnwale. Dị ka a kọwara n'Isi nke 2, eke nwere ọnọdụ ebe ihe na-eme n'ụwa na approximates random ọrụ nke agwọ ọrịa (eg, lọtrị nke ikpebi onye a ga-debara aha n'ime ndị agha). The uru nke a eke nnwale bụ na-eme nchọpụta na-adịghị ga-anapụta agwọ ọrịa; na gburugburu ebe obibi na-eme ka gị. Yabụ, na a eke nnwale, na-eme nnyocha ọ garaghị adị mkpa ka experimentally ịgbanwe ihe ndị mmadụ News faili ntanetịime.
N'eziokwu, ọ fọrọ nke nta concurrently na mmetụta uche Contagion nnwale, Coviello et al. (2014) na-emegbu ihe a pụrụ ịkpọ onye obi Contagion eke nnwale. Ha ịzụ, nke na-eji a Usoro a na-akpọ instrumental variables, bụ a bit mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ị na mgbe hụrụ ya n'ihu. Ya mere, iji kọwaa ihe mere na ọ dị mkpa, ka na-ewuli elu na ya. The mbụ echiche na nnyocha ụfọdụ nwere ike iji na-amụ obi contagion ga-eji tụnyere gị posts on ụbọchị ebe gị News Feed bụ ihe dị mma banyere gị posts on ụbọchị ebe gị News Feed bụ nnọọ adịghị mma. Nke a na obibia ga-abụ ezi ma ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ bụ nanị ikwu ihe ga-n'ụzọ mmetụta uche ọdịnaya nke gị posts, ma nke a obibia bụ mfịna ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ bụ na-amụ causal mmetụta nke gị News Feed on your posts. Ịhụ nsogbu na a haziri, tụlee Ekele. Ke United States, mma posts ọgọ na-adịghị mma posts plummet on Ekele. N'ihi ya, on Ekele, na-eme nnyocha pụrụ ịhụ na gị News Feed nnọọ mma nakwa na ị posted ihe ndị ziri ezi dị ka nke ọma. Ma, gị mma posts gaara mere site Ekele bụghị site ọdịnaya nke gị News Feed. Kama nke ahụ, iji na-eme atụmatụ na causal mmetụta na-eme nnyocha chọrọ ihe nke na agbanwe ọdịnaya nke gị News Feed-enweghị ozugbo agbanwe mmetụta uche gị. Ọ dabara nke ọma, e nwere ihe dị ka na-eme mgbe niile: na ihu igwe.
Coviello na ndị ọrụ ibe chọpụtara na a ezo ụbọchị na mmadụ obodo ga-, ná nkezi, ibelata nkezi nke posts ndị kwesịrị ekwesị site banyere 1 pasent onu ma na-amụba nkezi nke posts na-adịghị mma site banyere 1 pasent ebe. Mgbe ahụ, Coviello na ndị ọrụ ibe emegbu eziokwu a na-amụ nke mmetụta uche contagion na-enweghị mkpa experimentally ịgbanwe ihe onye ọ bụla News Feed. Na kachasi mkpa ihe ha mere bụ ụfọdụ otú gị posts na-impacted site na ihu igwe na obodo ebe ndị enyi gị na-ebi ndụ. Iji hụ ihe mere nke a na-eme uche, were ya na ị na-ebi New York City na i nwere enyi bụ onye bi na Seattle. Ugbu a, were ya na otu ụbọchị ọ ga-amalite mmiri na-ezo na Seattle. Nke a mmiri ozuzo na Seattle agaghị emetụta kpọmkwem gị na ọnọdụ, ma ọ ga-eme ka gị News Feed na-erughị mma na ndị ọzọ na-adịghị mma n'ihi na nke enyi gị posts. N'ihi ya, mmiri ozuzo na Seattle enweghị usoro manipulates gị News Feed. Mbịne a nsinammuo n'ime a pụrụ ịdabere na mgbakọ na mwepụ usoro a gbagwojuru anya (na kpọmkwem obibia ji site Coviello na ndị ọrụ ibe bụ a bit abụghị ọkọlọtọ) otú m na-etinye a kọwakwuru na n'ihu Ọgụgụ ngalaba. Ihe kacha mkpa icheta banyere Coviello na onye otu na obibia bụ na ọ na-nyeere ha na-amụ obi contagion na-enweghị mkpa na-agba ọsọ nnwale nwere ike nwere ike imebi sonyere, na o nwere ike ịbụ ikpe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ntọala ị nwere ike dochie nwere ndị ọzọ usoro.
Nke abụọ na 3 td bụ nụchaa:-eme nnyocha kwesịrị ịchọ nụchaa ha agwọ ọrịa iji mee ka ndị kasị nta na nsogbu na o kwere omume. Dị ka ihe atụ, kama igbochi ọdịnaya nke di ma ebughi, ndị na-eme nnyocha nwere ike sikwuo ọdịnaya nke di ebughi. Nke a boosting imewe ga agbanwewokwa n'ụzọ mmetụta uche ọdịnaya nke sonyere na News na-azụ, ma ọ ga-kwara otu n'ime nchegbu na-akatọ Baịbụl kwuru na: na nnwale gaara eme ka sonyere na-atụ uche ozi dị mkpa na ha News Feed. Na imewe na-eji Kramer na ibe, a ozi nke bụ ihe dị mkpa bụ ka o yiri ka a ga-egbochi dị ka onye na-abụghị. Otú ọ dị, na a boosting imewe, ozi na a ga-obibi ga-adị ndị na-adịghị mkpa.
N'ikpeazụ, nke atọ R bụ Belata:-eme nnyocha kwesịrị ịchọ iji belata ọnụ ọgụgụ nke ndị keere òkè na ha nnwale, ma ọ bụrụ na o kwere omume. N'oge gara aga, a gụnyere ya mere ndammana n'ihi na variable eri nke analọg nwere bụ elu, nke ume nnyocha na-ebuli ha imewe na analysis. Otú ọ dị, mgbe ọ na-efu variable eri data, na-eme nnyocha na-adịghị na-eche ihu a na-eri mgbochi on ha hà nnwale, na nke a nwere nwere iji iduga isi nnukwu nnwale.
Dị ka ihe atụ, Kramer na ndị ọrụ ibe gaara eji mee tupu ọgwụgwọ ọmụma banyere ha sonyere-dị ka tupu ọgwụgwọ ikenye omume-eme ka ha analysis rụọ ọrụ nke ọma. More kpọmkwem, kama atụnyere nkezi nke oma okwu na ọgwụgwọ na ịchịkwa ọnọdụ, Kramer na ibe nwere ike ji gbanwee nkezi nke oma okwu n'etiti ọnọdụ; na-abịaru nso-akpọkarị dị iche-in-ọdịiche nke nwere njikọ chiri anya mbuaha imewe na m kọwara mbụ ke ibuot (ọgụgụ 4.5). Ya bụ, ka onye ọ bụla soÚ na, na-eme nnyocha nwere ike kere a mgbanwe akara (post-omume omume - tupu ọgwụgwọ omume) na mgbe ahụ tụnyere mgbanwe scores nke sonyere na ọgwụgwọ na ịchịkwa ọnọdụ. Nke a dị iche-in-iche na obibia bụ rụọ ọrụ nke ọma statistically, nke pụtara na-eme nnyocha nwere ike isi nweta otu mgbakọ na mwepụ obi ike iji dị nta samples. Ya bu, site n'imeso sonyere dị ka "wijetị", na-eme nnyocha pụrụ mgbe mgbe-enweta ihe kpọmkwem atụmatụ.
Enweghị nwere ọnyá ọhụrụ data o siri ike ịmata kpọmkwem ole ihe ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma a dị iche-in-iche obibia gaara na nke a. Ma, Deng et al. (2013) kwuru na n'ime atọ online nwere na Bing search engine ha nwee ike belata ndịiche ha Atụmatụ banyere 50%, na yiri pụta a kọrọ maka ụfọdụ online nwere na Netflix (Xie and Aurisset 2016) . A 50% ndịiche Mbelata pụtara na mmetụta uche Contagion na-eme nnyocha nwere ike enwewo ike bee ha sample na ọkara ma ọ bụrụ na ha na-eji a ubé dị iche iche analysis ụzọ. Yabụ, na a obere mgbanwe ke analysis, 350.000 ndị mmadụ nwere ike e chebere na-ekere òkè nnwale.
Mgbe a na isi i nwere ike na-eche ihe mere eme nnyocha kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na 350.000 ndị mmadụ na-enwekarị obi Contagion isi. E nwere ihe abụọ akpan akpan atụmatụ nke mmetụta uche Contagion na-eme ka nchegbu na oké size kwesịrị ekwesị, na atụmatụ ndị a na-akọrọ ọtụtụ ndị digital ubi nwere: 1) e jighị n'aka ma nnwale ga-eme ka nsogbu ụfọdụ sonyere na 2) òkè bụghị afọ ofufo. Na nnwale na abụọ ndị a ji mara na o yiri ihe amamihe na-nwere dị ka obere ka o kwere mee.
Ná mmechi, atọ R's-Dochie, Nụchaa, ma belata-enye ụkpụrụ ndị pụrụ inyere ndị nnyocha na-ewu ụkpụrụ ọma n'ime ha ibuo aghụghọ. N'ezie, onye ọ bụla n'ime ndị a ekwe omume mgbanwe mmetụta uche Contagion ewebata ahia-offs. Dị ka ihe atụ, ihe àmà si eke nwere ọ bụghị mgbe niile ka dị ọcha dị ka ihe àmà sitere enweghị usoro nwere na boosting nwere ike ịbụ ihe logistically siri ike ime eme karịa ngọngọ. Ya mere, nzube nke ekwu mgbanwe ndị a abụghị ka nke abụọ-eche na mkpebi nke ọzọ na-eme nnyocha. Kama, ọ bụ iji gosi otú atọ R si nwee ike iji mee ihe n'ebe a ezi uche n'ọnọdụ ahụ.